UJackson, uMMS • Umzimba Wokuhlikihla neNuRu Massage
Thola okugcotshwayo okungcono komzimba ne-nuru massage eJackson, MS.
UJackson, ngokusemthethweni iDolobha laseJackson, iyinhloko-dolobha nedolobha elinabantu abaningi kakhulu esifundazweni saseMelika iMississippi. Ingesinye sezihlalo ezimbili zesifunda seHinds County, kanye neRaymond, iMississippi. Idolobha laseJackson lihlanganisa namahektare angama-3,000 XNUMX ahlanganisa iJackson-Medgar Evers International Airport eRankin County nengxenye encane yaseMadison County. Thola okungcono kakhulu hlikihla umzimba futhi i-nuru massage eJackson, MS.